Gambia: Voasazy Higadra Mandrapaha-faty Ireo Nandray Anjara Tamin’ny Fanonganam-panjakana Tsy Nahomby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2015 2:20 GMT
Modou Njie, iray amin'ireo miaramila Gambiana hita fa meloka nandritra ny raharaham-pitsarana miafina. Voasazy ho faty izy. Nahazoana alalana avy amin'i Kibaaro News ny sary.
Nanatontosa fanonganam-panjakana manohitra ny fitantanan'i Yahya Jammeh ny vondrona miaramila tsy faly tamin'ny 30 Desambra 2014, voasakan'ireo tafika matoky ny filohan'i Gambia anefa izany. Ny lietnà Lamin Sanneh, miaramila niala an-daharana sy Komandin'ny andia-miaramila mpiambina ny Filoha teo aloha no nitarika ny fanafihana ny Lapam-panjakana vao maraina. Namoy ny ainy nandritra ny fanafihana ny Lietnà Sanneh sy ny namany roa raha voasamboatra kosa ny iray hafa ( zazavao Modou Njie, izay voaheloka ho faty ankehitriny).
Taty aoriana, Amerikana-Gambiana roa no voampanga teo ambanin'ny Lalànan'ny Tsy Fiandaniana noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fanonganam-panjakana tsy nahomby. Araka ny fanambaran'ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana, voampanga tamin'ny andraisan'izy ireo anjara tamin'ny fanonganam-panjakana i Cherno Njie, 57 taona, mpandraharaha Amerikana teratany Gambiana monina ao Austin, Texas, sy Papa Faal, 46 taona, olom-pirenena Amerikana-Gambiana avy ao Brooklyn Center, Minnesota. Voalaza fa nankao Gambia izy roalahy ireto mba handray anjara fotsiny amin'ny fanonganam-panjakana, saingy afa-nandositra tany Etazonia avy any Senegaly.
Nanamafy ny fiampangana ireo miaramila enina farafahakeliny izay voasazy ho faty ka hatramin'ny figadrana mandrapahafaty ny manampahefana ao Banju . Fitsarana miaramila miafina natsangana fotoany fohy taorian'ny fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny 30 Desambra 2014 no namoaka ny sazy. Notsaraina noho ireo fiampangana maromaro ireo miaramila, anisan'izany ny fivadihana sy ny fandikan-dalàna miendrika fikomiana.
Araka ny filazan'ny fampielezam–peom-panjakana, Fahitalavitra sy Radio ao Gambia (GRTS), voasazy ho faty ny Lietnà Kolonely Sarjo Jarju sy ilay miaramila zazavao Modou Njie raha voasazy higadra mandrapahafaty kosa ny Kapiteny Abdoulie Jobe, Kapiteny Buba Bojang, Lietnà Amadou Sowe ary ny Kapiteny Buba Sanneh. Ny talen'ny fampanoavana, Sh Barhoun no nitarika ny fampanoavana raha mpisolovava tsy voalaza anarana avy ao amin'ny Sampan-draharaham-pirenen'ny Fanampiana Ara-pitsarana (NALA) kosa no nisolo-tena ireo voampanga.
Naneho ny ahiahiny momba ny raharaham-pitsarana ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona ary niantso ny governemanta Gambiana mba tsy hanatanteraka ny sazy avy hatrany. Tamin'ny taona 2012, nanapa-doha ny 9 tamin'ireo gadra 42 voasazy ho faty ny governemanta, ary nahazo fanalefahan-tsazy ho 29 taona ny hafa. Na dia izany aza, nanaiky ny “fanovan-tsazy misy fepetra” ny filoha Yahya Jammeh noho ny teritery avy ao an-toerana sy iraisampirenena.
Tsy nandray anjara tamin'ny Fanadihadiana Ara-potoana Manerantanin'ny Firenena Mikambana (Universal Periodic Review (UPR)) i Gambia. Nanamarika ny Amnesty International fa 93 tamin'ireo torohevitra 171 tamin'ny Universal Periodic Review tao Geneva ihany no neken'ny governemantan'i Gambia.
Tamin'ny Novambra 2014, nilaza ny Firenena Mikambana fa manam-pahaizana momba ny zon'olombelona avy ao amin'ny Firenena Mikambana no voatery nampiato ny ampahany feno tamin'ny fitsidihan'izy ireo an'i Gambia rehefa nolavina tamin'izy ireo ny fandehanana any amin'ireo faritry ny fonja sasany ary nosakanana tsy hamita ny fanadihadiana momba ny tranga fampijaliana sy famonoana olona nandritra ny dia voalohan'izy ireo voalohany tao amin'ny firenena ity ekipa mpanao fanadihadiana tsy miankina ity, araka ny filazana an-gazety navoakan'ny biraon'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona.
“Fanitsakitsahana bevava ny zo hiaina sy zo hanana fitsarana ara-drariny ny sazy ho faty nomena ireo miaramila voampanga ho nandray anjara tamin'ny fikasana hanongam-panjakana tao Gambia,” hoy ny Amnesty International.
“Misy tsy fahampiana mihitsy ny rafi-pitsarana ao Gambia ary mampiahiahy anay ny fahamarinan'ny raharaham-pitsarana, indrindra fa notontosaina tamin'ny fomba miafina izany. Mitaky ny Amnesty International mba hovaina ho sazy an-tranomaizina ny sazy ho faty, eo am-piandrasana ny raharaham-pitsarana vaovao manaja ny fitsarana ara-drariny araka ny fenitra iraisampirenena ary tsy tafiditra amin'izany ny fanamelohana ho faty, “hoy izy nanamarika.
Naneho hevitra tamin'ny fanambaran'ny Amnesty International tao amin'ny Facebook i Ebrima Manneh nilaza hoe:
Nolazain'ny Amnesty International daholo ilay izy. Ao anatin'ny rafi-pitsarana feno fahabangana, mampiahiahy hatrany ny didim-pitsarana indrindra amin'ny fitsarana atao miafina. Tokony handray fepetra tsy misy hatak'andro sy hentitra amin'ity fitondrana mbola manohy mampirohoroho ny olom-pirenena ity ny fiarahamonina iraisam-pirenena.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny Vaomiera Ambonin'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'olombelona, Rupert Colville fa miahiahy mafy momba ny sazy fanamelohana ho faty izy ireo. “Manantena izahay fa avela hampiakatra ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony ireo gadra enina, satria zon'izy ireo izany, ary miantso ny governemanta Gambiana izahay mba hihazona ny fanalavana ny fe-potoana amin'ny fanatanterahana ny fanamelohana ho faty.”
Tamin'ny fanehoana hevitra tamin'ny fihetsiky ny Firenena Mikambana, nangataka tamin'ny Firenena Mikambana ny mpamaky iray ny tranokalam-baovao Kairo mba ho hentitra kokoa amin'ny Filoha Jammeh, izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 20 taona mahery.
Tokony mivantana sy masiaka kokoa amin'ny fitondran'i Jammeh ny Firenena Mikambana. Tsy vao voalohany izy no nanasazy olona ho faty tsy amin'ny antony. Tokony hampahafantarina azy fa olombelona ihany izy na amin'ny fomba ahoana na manao ahoana ho fanombohana. Mila ny fanampian'ny any ivelany ny vahoaka Gambiana mba hialana amin'i Jammeh. Hanampy azy ireo anie Andriamanitra …
Raha manontany tena mikasika ny nanaovana izao raharaha goavana izao an-kiafina, nanoratra tao amin'ny tranokalam-baovao JollofNew ao Gambia i Malick Njie:
Firenena mahaliana i Gambia. Nahoana no atao an-kiafina ao anaty fitsarana miaramila mihidy varavarana ny raharaham-pitsarana goavana tahaka ity? Hiaro ny vahoakan'ity firenena mahafinaritra ity amin'ilay olon-doza Yahya Jammeh anie i Allah
Nilaza i Maxs, mpamaky iray hafa ao amin'ny tranokalam-baovao Kairo fa homena voninahitra sy hotsarovana ireo nanao sorona ny tenany tsy am-pitadiava-tombotsoa manohitra ity fitondrana Jadona ao Gambia ity:
Tokony hofoanana amin'ny fomba rehetra ny asan-keloka bevava ao Banjul. Tokony avotsotra ireo miaramila tsy manan-tsiny. Raha manohy mankasitraka ny didy jadona amin'ny alalan'ny fahanginana tanteraka sy ny tsy fandraisana andraikitra hamonjena ny firenena ny ankamaroan'ny Gambiana, hotsarovana hatrany ho tena zanakalahin'i Gambia tia tanindrazana ireo nanao sorona ny tenany sy ny fianakaviany ho amin'ny fanafahana sy ny fahalalahana. Homena voninahitra ao amin'ny morontsirakan'ny fitsikiana tsy ho ela ireo nanao sorona ny tenany am-pitiavana.
Amadou Maneh naneho hevitra hoe:
Tsy misy olona sy toerana mendrika an'i Jammeh. Sahiko mihitsy ny miloka fa na ny helo aza voatery hifankazatra aminy.
Tao amin'ny Twitter, Sam Phatey nanontany tsotra hoe:
Milaza ve ny miaramila ao Gambia fa malalaka sy ara-drariny ny fitsarana ara-miaramila miafina? Matahotra ny fampiharana indray ny fanapahan-doha goavana aho, tena mampanahy!